Lehilahy iray no namoy ny ainy tamin’izany. Nanoloana io tranga io dia tonga nametraka fitoriana teo anivon’ny CSP Farafangana ny havan’ny maty. Fantatra ary fa lehilahy miisa 6 izay monina ao an-toerana ihany no nahavanon-doza. Nokarohina avy hatrany ireto farany ka ny 2 lahy no voasambotra ny talata teo 25 febroary niaraka tamin’ny basy lava iray. Nandritra ny fanadihadiana dia niaiky izy ireo fa anisan’ny namono io lehilahy io, niaraka tamin’ireo namany miisa 4 izay mbola karohina ankehitriny. Nilaza moa izy ireo fa valifaty no antony noho ity lehilahy ity izay nolazain’izy ireo fa namono sy nahafaty ny rain’izy mirahalahy ireo tamin’ny fomba feno habibiana ihany koa. Natolotra ny fampanoavana ny alarobia teo izy roalahy ary efa naiditra am-ponja vonjimaika.